China Abavelisi be-casting die kunye nabathengisi | I-P & Q
Die eyahlulayo yinkqubo yokuvelisa esebenzayo neyoqoqosho. Isetyenziselwa ukuvelisa iinxalenye zesinyithi ezintsonkothileyo ezenziwe ngumbumba onokuphinda usebenze, obizwa ngokuba kukufa. Oku kusweleka ngokubanzi kunikezela ngobomi obude benkonzo, kwaye bayakwazi ukuvelisa izinto ezinomtsalane ezibonakalayo.
Inkqubo yokuphosa ifa ibandakanya ukusetyenziswa kwesithando somlilo, isinyithi esinyibilikisiweyo, umatshini wokuphosa oswelekileyo kunye nesiko elenzelwe ukuba lenziwe. Isinyithi siyanyibilika kwiziko lomlilo emva koko umatshini wokuphosa ufeze loo ntsimbi kwidiski.
Umzi-mveliso we-P & Q ophethwe ngumntu ofayo u-Haining, eZhejiang, China.
Siyi-ISO 9001: 2015 i-aluminium eqinisekisiweyo yokuphosa umenzi egxila kwiinkonzo zokuphonononga ukusweleka kumashishini aphambili kunye neenkampani.
Die umatshini bephosa ukusuka kwiitoni ezingama-200 ~ 800tons. Siyaqhubeka nokutyala imali kwizixhobo ezitsha ukuze sijongane ngempumelelo nomceli mngeni wokuphuculwa okuqhubekayo kwaye sisoloko sibonelela ngezona zisombululo zifanelekileyo kuzo zonke iimfuno zabathengi bethu.
Singoochwephesha kwiibhetshi ezincinci eziphakathi enkosi ngesixhobo sethu samava otshintsho olukhawulezayo. Sinokubonelela ngezisombululo ezibandakanya iimfuno zakho eziguqukayo. Ukunyibilika komthamo ukuya kuthi ga kwi-2000 Kg / h Akukho ngxaki ekusebenzeni neealloys ezahlukeneyo ngexesha elinye.
I-P & Q ilawula lonke ikhonkco lamaxabiso lemveliso elisivumela ukuba sinike abathengi bethu iindawo ezigqityiweyo, ezilungele ukudityaniswa nemveliso yokugqibela.
Ukusukela ngo-2005 i-P & Q ibandakanya izixhobo ezenziweyo zokwenza imveliso kunye nefilosofi ukuze kuphuculwe ukuqhubeka kweenkqubo kunye neziphumo.
Izibonelelo ze Ukufa uMlinganiso
Ukufakwa i-die kunokuvelisa iinxalenye zesinyithi ngeemilo ezintsonkothileyo kwaye zikwenza oko ngokunyamezelana okusondeleyo kunezinye iinkqubo ezininzi zokuvelisa ubunzima.
Ukulahla isivuno ikakhulu amazinga aphezulu emveliso, enamalungu afuna machining amancinci okanye angabikho.
Iziphumo zokuphosa ukufa kwiindawo ezizinzileyo, ezizinzileyo, kunye neprojekthi yokuziva kunye nokubonakala komgangatho.
Iinxalenye ezibe die die zinamandla ngaphezu kweplastikhi yokubumba ngenaliti, ezibonelela ngokuchaneka komlinganiso ofanayo. I-Wall castings yomelele kwaye ilula kunaleyo inokwenzeka ngezinye iinkqubo zokuphosa.
Iimpawu zokuphosa ifa ngokuchaneka okuphezulu kunye nokuphinda kwenziwe kwakhona koyilo lobunzima obuhlukeneyo kunye nenqanaba leenkcukacha.
Ngokubanzi, kufa iziphumo zokuphosa kwiindleko ezincitshisiweyo ukusuka kwinkqubo enye xa kuthelekiswa nenkqubo efuna amanyathelo ahlukeneyo emveliso. Inokonga imali ngokunciphisa inkunkuma kunye nezinto ezilahliweyo.
Ukulahlwa komntu kudla ngokubangela ukuveliswa ngokukhawuleza okanye isantya.
Egqithileyo Ukukhanya Kwezitalato ze-Street Street-PQSL003
Okulandelayo: Inaliti yeplastiki